UDemi Lovato Gets Ababandakanyeke- amaNigerian, ama-Afrika kunye neMbali yeHlabathi
I-Rave News Digest: UDemi Lovato obandakanyeke kuMax Ehrich, uKiller Floyd's Killer wahlawuliswa ngokuchaseneyo kweRhafu, iLiverpool + Okunye
DWo-Lovato obandakanyeka kumdlali webhola, uMax Ehrich, u-Ex-Cop obulale uGeorge Floyd ogwetyelwe ukukhutshwa kwirhafu, iLiverpool ibe ziintshatsheli ze-Premier League. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UDemi Lovato ubandakanyeka kumdlali weqonga uMax Ehrich
idemi lovato ubandakanyekile. Le mvumi, ineminyaka engama-27 ubudala, ivakalise iindaba ezimnandi kwiposti ye-Instagram xa yayirhola intombi yayo eneminyaka engama-29 ubudala UMax Ehrich. Ukuthatha imidiya yoluntu, uDemi Lovato ubhengeze ukuba uzibandakanya nothotho lwemifanekiso ekhuthazayo kunye nabalandeli bakhe abazizigidi ezingama-88.4.
Wabhala: “Xa ndiseyintombazana encinci, utata wam wokuzalwa wayehlala endibiza“ ngeqabane lakhe elincinci ”- into eyayinokuvakala ingaqhelekanga ngaphandle komntakwabo weenkomo wasemazantsi njengotsholo. Kum, yayiyinto evakalayo. Kwaye namhlanje elo lizwi lenza ukuba ligqibelele kwakhona kodwa namhlanje ndiza kuba liqabane lomnye umntu. @maxehrich - bendisazi ukuba ndiyakuthanda xa ndandihlangana nawe. "
Ukudibana kwabo kwenzeke elunxwemeni oluhle, kwaye uDemi waqinisekisa ukuba makakhwaza umfoti owayehlala efihliwe ukuze abambe umzuzu okhethekileyo. Umnxeba wokubandakanyeka kukaDemi Lovato sisithsaba se-emerald-esuswe nguRodeo Drive ubucwebe obuxabisekileyo, UPeter Marco kwaye kuqikelelwa ukuba ixabisa phakathi kwe- $ 450,000 kunye ne- $ 850,000.
2. Abantu baseGhana banandipha ezinye iinyanga ezi-3 zombane wasimahla, amanzi-u-Ofori-Atta uyabhengeza
Abantu baseGhana bazonwabele ezinye iinyanga ezintathu zamanzi asimahla kunye nombane njengoko urhulumente eqhubeka nokunciphisa umthwalo wobhubhane we-COVID-19 kubemi.
UMphathiswa wezeziMali, UKen Ofori-Atta obhengeze oku ngexesha lohlalutyo lohlahlo-lwabiwo mali lwaphakathi enyakeni wathi kungenxa yokuba urhulumente ebeka inkxalabo kunye neminqweno yomntu oqhelekileyo waseGhana.
Kungenxa yeso sizathu le nto sinciphise amaxabiso ombane ngesiqingatha kwaye sanikezela ngamanzi aselungele wonke umntu ukusukela ngoMatshi kulo nyaka. Kwaye siya kuyandisela ezinye iinyanga ezintathu, ” uxelele iPalamente, ngoLwesine.
3. #RamaphosaResigns iimeko zangoku nje iiyure ngaphambi kwedilesi yakhe
UCyril Ramaphosa ngumongameli phantsi koxinzelelo. Ubhubhane we-COVID-19 uye wanyuka kakhulu, ejongela phantsi ulawulo urhulumente wakhe azame ukulukhupha. Ngotywala nogwayi sele luvaliwe emashalofini, abantu baseMzantsi Afrika bathathe izikhalazo zabo kwimithombo yeendaba zentlalo.
Isimo ekuqaleni saqala ubomi njenge-hashtag ebamba iliso ukukhuthaza iiakhawunti ukuba zilandelelane, zikhuphula umda wababukeli umsebenzisi ngamnye anokubonwa ngelixa zikwi-intanethi. Nangona kunjalo, #RamaphosaResigns Ube nekhephu imini yonke, njengoko abantu bakhalazayo ngenkohlakalo nokuvalwa kwemithetho phantsi kobunkokeli bakhe.
4. UDerek Chauvin, igosa elaliyintloko elabulawa ekufeni kukaGeorge Floyd, otyholwa ngokurhola irhafu
UDerek Chauvin - Ipolisa lalibulala uGeorge Floyd
UDerek Chauvin, ipolisa langaphambili laseMinneapolis lityholwa ngokubhubha kuka UGeorge Floyd, ubanjiwe ngokuphepha irhafu. Umfazi ka-Chauvin, Kellie May Chauvin, ofake isicelo soqhawulo mtshato, naye wabekwa ityala, Igqwetha laseWashington County uPete OrOOne esitatimendeni sangoLwesithathu.
Ii-Chauvins zityholwa ngokusilela ukufaka iifom zerhafu yengeniso kunye nokuhlawula irhafu yengeniso karhulumente eMinnesota. Amagosa athi esi sibini besingasafakwanga kwaye sihlawulelwa irhafu kwaye besilele ukuhlawula irhafu yokuthengisa kwisithuthi.
5. I-Liverpool ibethe i-Chelsea ukuphakamisa indebe yePremier League
ILiverpool ibhiyozela njengoko iphakamisa indebe yePremier League.
I-Liverpool ibhiyozele ukufumana isihloko sebhola okokuqala ngqa kwiminyaka engama-30 kwisitayela semidlalo yeentshatsheli zePremier League ukuba ibethe i-Chelsea kumdlalo obalaseleyo e-Anfield.
Jordan Henderson -Kwangoku elimele-wafumana indebe evela kwiLiverpool legend Sir UKenny Dalglish kwipodium ekhethekileyo eyakhelwe kwi-Kop emva SikaJurgen Klopp icala lenze ukuba ibe lixesha lePremier League elingalawulekiyo e-Anfield.
I-Chelsea ngoku idinga iphuzu ukusuka kumdlalo wabo wokugqibela ekhaya ukuya eWolves ngeCawa ukungqina indawo kumanqaku amane aphezulu.
I-Rave News Digest: UDemi Lovato uthetha nge-overdose yakhe, ukuvalwa komda wase-Nigerian, u-Andre Gomes ukwenza ukubuyisela okugcweleyo + ngakumbi
Uhlobo Rave Julayi 23, 2020